lifestyle – enagrikkhabar
१६ लागेकि त्यो केटि को ..
गाउँको कोदोको लोकल रक्सीले मातिएको म पनि मूडमा थिएँ । पर्सबाट सयको नोट निकालेर हातमा थमाएँ । सयको नोट जीवनमा पहिलो पटक हातमा परेपछि केटीका ससाना चिम्से आँखा आश्चर्यले फैलिए । “यो किन नि सर ?” हातमा परेको सयको नोटलाई अविश्वासको भावले पल्टाएर हेर्दै उसले सोधी । “तिम्रो कुमारीत्वको मोल” भनौंजस्तो भएको थियो , त्यसो भन्नु उसले मप्रति गरिरहेको आदरको अपमान जस्तो लाग्यो र भने “राखन“ ।उस्ले चोलीको माथ्लो भाग तानेर सयको त्यो नोट त्यहाँ घुसार्न खोजी । त्यसो गर्दा उसका दुधको पोका देखियो । मैले आफूलाई रोक्न सकिन र हात अघि बढाएर उसको त्यही दूध समाएँ । केटी झसंग भएर आफूलाई अलि पछि तानी। मैले छोड्दै छोडिन , च्याप्प समाएर चोलोमाथिबाटै विस्तारै दूध माड्न थालें ।
भरखर जवानीमा प्रवेश गरेकी केटीको दूध कटमेरो अम्बा जस्ता थिए। जति जति दूध समाउँदै जान्थें त्यतिनै मलाई मजा आउन थालेको थियो । विस्तारै चोलीको टाँक खोले । भित्रबाट केही नलाएका केटीका दूध उड्न लागेका परेवाका बचेरा जस्तो गरी फुत्त निस्किए । अब म उन्मुक्त भइसकेको थिएँ । दुईटै दूध च्याप समातेर मजाले मोल्न थाले ।
त्यो मन्द उज्यालोमा उसको खैरो रंगका दूधको मुन्टा क्याटवरी चकलेट जस्तो देखिइरहेको थियो । मुख त्यही गाडेर क्रमसः चुस्न थालें । केटी “छ्या सर , कुतकुती लाग्यो” भनेर हाँस्न थाली । मैले आफ्नो पाइन्ट खोलें र ठाडो भइसकेको मेरो लाडोमा ल्याएर केटीको हात राखिदिएँ । केटीले च्याप्प समाई , म भने उसको उसको दूध चुस्न थालें । केटीको फरिया एक छेउबाट तानें , मंगोलियनहरुको त्यसै पनि शरिरमा रौं कम हुन्छ त्यसमाथि भरखर १५ पुगेर १६ लागेकी त्यो केटीको पूतीको माथ्लो भागमा अलि अलि कैलो रौं मात्र थिए । पुक्क उठेको उसको त्यो पुतीले मलाई आमन्त्रण गरिरहेको थियो । पूतीमा हात पुर्युाएँ , उसको पूती रसाउन थालेको थियो ।
उसलाई उत्तानो पारेर खाटमा सुताएँ । आफू माथिबाट चढें , उसको पुष्ट पूतीमा मेरो तातिएको लाँडो पसाउन खोजें । पहिला पस्दै पसेन , त्यसपछि उस्का दुबै तिघ्रालाई दुईतिर फैलाएर आफ्नो लाँडोको टुप्पा पूतीको मुखैमा जोडेर कस्सेर एक धक्का लगाएँ । “ऐया“ केटी पीडाले चिच्याई । मेरो लाँडोको सुपारी भित्र पसेछ । त्यसपछि मैले केटीको मुखमा आफ्नो मुख जोडेर ओठ चुस्न थाले । हात भने उस्को भरखर फैलने उपक्रममा रहेका दूध मोल्नमा व्यस्त थिए । केही सारो केही गिलो ती दूधले मेरो उत्तेजना बढाई रहेका थिए । अलि अलि मात्र छिरेको लाँडोलाई हातले समाएर पूतीमा पूरै छिराउने प्रयास गर्दै कम्मरले धक्का मार्न थालें । “ऐयाऽऽऽ ऐयाऽऽऽ आमाऽऽऽ आमाऽऽऽ बुवा हौऽऽऽ मरें सरऽऽऽ विस्तारैऽऽऽ मरेंऽऽऽऽ ऐयाऽऽऽऽ ऐयाऽऽऽऽ“ केटीको मुखबाट आवाज निस्किदैं थियो । म भने आफ्नो धक्काको क्रम बढाउँदै थिएँ । जतिजति लाँडो तातिदैं जान्थ्यो म उत्तिनै छिटो कम्मरको बलले धक्का मार्दै गएँ । “ऐयाऽऽऽऽऽ ऐयाऽऽऽऽऽऽऽ उफऽऽऽऽऽऽ आमा हौऽऽऽऽऽऽ स्वाँऽऽऽऽऽस्वाँ… ऽऽऽऽऽऐया हौ ऽऽऽऽऽऽ मरे, ए सर मार्ने……ऽऽऽकि क्या….. होऽऽऽऽऽ ऐयाऽऽऽऽऽ ऐंयाऽऽऽऽ आमा आमौं……ऽऽऽऽऽस्वाँऽऽऽऽस्वाँऽऽऽऽऽ” केटीको मुखबाट निस्किरहेको आवाजले मलाई झन मज्जा आइरहेको थियो ।
पूर्ण उत्तेजनामा आइसकेको थियो जोसमा केटीका गाला करयाप्प टोके । “ऐया” केटी चिच्याई । झन्डै १५ मिनेट जति चिकेपछि मेरो लाँडोले नौनी फाल्यो “फच्याक फच्च फच्च” गरेर । केटीको पूतीबाट लाँडो निकालेर हेरेको रगतै रगत । केटीको भर्जिन झिल्ली च्यातिदा त्यसको रगत मेरो लाँडोमा लागेको रहेछ । रगत त्यतिधेरै नभए पनि केटीको तिघ्रासम्म चुहिएको रहेछ । तौलिया निकालेर पुछि दिएँ । जीवनको पहिलो चिकाईले मलाई जुन मज्जा आयो त्यसका लागि म जुन मूल्य तिर्न पनि तयार थिएँ । भर्जिन केटी यहाँ त मेरो लागि सित्तैमा उपलब्ध थिई । पहिलो पटक भर्जिनिटी भंग गर्नुमा जुन मज्जा आउँछ त्यो जीवनभर चिक्दा पनि आउँदैन ।
१८ बर्से केटो सङग यौन….
११ बर्से केटो सङग चिकाउदा:
त्यति बेला मेरो उमेर त्यस्तै १६ भयेको थियो होला। घरमा म यक्लि छोरि हुनाले घरको रेखदेख सबै म नै गर्थे। म बिहान बिहान पढ्न जान्थे। बाकि दिन् भरि नै घरमा हुन्थे। ममि ड्याडि पनि दिनमा नै कुनै सरकारि आफिस मा काम गर्नु हुन्थ्यो। हाम्रो घरको काम मा सहयोग गर्न गाउ बाट १ बर्श पहिले बाबा ले १० बर्सहो यक जना केटा लेराउनु भाको थियो। केटाको उमेर सानि नै भये पनि उस्को जिउ डाल सपृ सकेको थियो। केटा पनि दिउसो स्कुल जान्थ्यो म बिहान कलेज जान्थे। हाम्रो भेट प्राय बेलुका नै हुन्थ्यो । उस्ले मलाई दिदि भनेर बोलाउथ्यो र मसङ कुनै हिचकिचहट बोल्चाल गरि रहन्थ्यो। बानि ब्याभार बच्चा जस्तो नै थियो। जेठ महिनाको १ दिन को कुरा हो , म आफ्नो कोठाभित्र पढ्न बसेकि थिएं । दिउँसोको त्यस्तै साढे बार बजेको हुंदो हो । बाहिर लागेको चर्को घामले रुखविरुवाका पातहरु लल्याकलुलुक भएर ओईलिएका थिए । थोपै हावा नचलेर बसिनसक्नु भएको थियो मेरो कोठा अझ त्यसमाथी माथीबाट जस्ताको छानो तातिएर पग्लेला झैं भएको । त्यो उखुम गर्मीमा म किताब खोलेर त बसेकि थिएं तर पढाईमा भने पटक्कै मन थिएन । बैसाख जेठको गर्मीमा केटीहरुलाई कुखुरा पालुं कि पोईला जाउं जस्तो हुन्छ भन्थे सांच्चै त्यस्तै भएको थियो मलाई । कोठाभित्र गुम्सिएर म अनेक रंगीन कल्पनामा डुब्दै थिएं । मेरो शरिरमा पातलो सुतीको म्याक्सी मात्र थियो । म्याक्सीभित्र पेण्टी र ब्रा फुकालेर मिल्काई सकेकि थिएं ।
एक त गर्मीले गर्दा शरिरमा टाँसिने कपडाहरु लगाउनै नसकिने त्यसमाथी यसरी रोम रोम रोमाञ्चित हुने कल्पनाको रंगीन संसारमा डुब्दा मलाई त्यस्ता कपडाहरुले अवरोध खडा गरेको महसुस हुने गर्छ । पढ्नको लागी खोलेको किताब खुल्लै मेरो पेटमाथी घोप्टो परेर नाईटोमा मुख जोतिरहेको थियो । म यौटा हातले म्याक्सी माथी बाटै आफ्नै छाती खेलाईरहेकि थिएं । मलाई आफैंले छाती खेलाउंदा थोरै दुख्ने गरेर स्तनको मुण्टो निचार्यो भने आनन्द लाग्छ – त्यसैले पनि होला मेरो छातीको गोलाई र स्तनको मुण्टो निक्कै सप्रेको निबुवा जस्तो ठुलो ठुलो भएको । म उत्तानो परेर बिछ्यौनामा मडारिईरहेकि थिएं । मडारिने क्रममा तलबाट म्याक्सी सुर्किईएर पेट सम्म आएको थियो । म अर्को हातले भने बाक्लिएर कालो हुंदै जाने क्रममा भएका रहर लाग्दा योनिक्षेत्रका रौंहरु मुसार्दै थिएं । वाताबरणमा भएको गर्मी र मेरो रंगीन कल्पनाले उमारेको जोसको संमिश्रणले गर्दा मलाई मेरो योनि भित्रबाट ज्वालामुखी विष्फोटन भएर लाभाहरु छरिन्छ कि जस्तै लाग्दैथियो । विष्फोटनकै संकेत स्वरुप मेरो योनिको मुखभागबाट निस्किएको चिल्लो चिप्लो पदार्थ मेरो हातले स्पर्स गर्दै थिय। त्यतिकै मा ढोका बाहिर बाट त्यो केटा दिदि भन्दै बोलाउन थाल्यो। म थोरै सम्हालियर बाहिर निक्ले र सोधे किन आज १२ बजे नै स्कुल बाट फर्केको? आज स्कुलमा हड्ताल छ भयेर चाडै नै आउनु परेको कुरा सुनायो।। मेरो जवानि को जोस अझ नि कम भको थियेन त्यो केटा लाई मित्र लगेर फटा फट म सङग चिकाई हलु जस्तो लग्दै थियो। तर फेरि केटा लाई थाहा छ कि छैन , फेरि के भन्ने हो भनेर मैले तुरुन्त केहि भन्न अनि गर्न पनि सकिन।
उ म मथि चढ्यो। उस्ले आफै मेरो पुतिमा लाडो घुसाउन नै सकेन। कहिले दाया कहिले बाया यस्तै यता उता उस्को लाडो चिप्लि रह्यो। आखिर मा मैले नै १ हात ले उस्को लाडो समति दोश्रो हातले पुतिको मुख फैलायेर पुतिको मुख मा लाडो राखे। अनि उसलाई बल गरेर धकल्न लगाये। उस्ले पनि बल लगयेर धक्का दियो। बल्ल्ल पुतिमा लाडो पस्यो। खुब् मजा आयो। पैला त उस्ले लाडो पुति भित्र नै रखि रह्यो नि १ -२ मिनेट पछि मैले नै भने आगडि पछडि गर्न भनेर। उस्को लाडोको टुप्पो मा धेरै काउकुति लागेको र तातो भयेको कुरा गर्दै थियो उस्ले। मैले जे भये पनि आफै ले पनि तल बाट भये पनि पुति तल माथि गर्दै थिये। करिब आधा घन्टा चिके पछि मेरो माल झरेको जस्तो भयो। तर त्यो केटाको केहि पनि भयेको थियेन। मलाई त्यति बखत चिकन पुगेको ले उस्को लाडो मेरो पुति बाट झिकिदिय तर बिचरा को लाडो यक्दम थन्केको थन्केइ थियो। मैले उस्को लाडो केहिबेर चुसे तर पनि केहि झरेन । उस्ले भन्दै थियो कि उस्को लाडो फुट्ला जस्तो रन्केको छ। मैले सम्झे यो केटाले आज सम्म आफ्नो माल झारेको रैनछ। यक पटक पनि बिर्य नझरेको वा यक पटक पनि हस्थ मैथुन नगरेको केटा हरुको लाडो खालि ठन्केको ठन्कै गर्ने रहेछ। मलाई समस्या पर्यो अब यसको लाडो कसरि सुताउने? मैले आइडिया निकाले उस्लाई चिसो पानि ले नुहाई दिय।
बल्ल त्यसको लाडो थन्कन छोड्यो। बिचरा लाई लाडो बाट फुसि झार्ने तरिका पनि थाहा रहेनछ। मैले पनि ब्लु फिल्म मा खलि चिकेको मात्रै देखायकि थिय। माल झारेको देखयेको थिईन। त्यो दिन मैले २ पटक शम्म त्यो केटालाई चिकया तर पनि केटाको माल झरेन। त्यस्तै ३-४ दिन मैले त्यो केटा लाई चिकाये। आफुलाई नपुगुन् जेल शम्म कहिले काहि त १ घन्ट्टा शम्म पनि चिके होला तर केटाको लाडो ठाडो को ठाडो नै भै रहन्थ्यो। चिसो पनि ले धोय पछि मात्रै उस्को लाडो सानो हुन्थ्यो। मैले १ दिन उस्लाई पुरा ब्लु फिल्म देखाई दिय। फिल्म मा चिकि सके पछि लाडो बाटा फुसिको पिचकरि निस्केको पनि देख्यो केटो ले। अब भने माल झार्न सिक्ला जस्तो लागेर मैले भने यस्तो माल आउन लाग्यो भने पुति बाट लाडो झिकि हल्नु पर्छ है। उस्ले हुन्छ भन्दै चिक्यो त्यो दिन पनि। तर त्यो दिन पनि उस्ले माल झार्न सकेन। येस्तै हामि दिनमा ३-४ चोटि चिक्दा पनि उस्को माल झर्न सकेको थियेन। यसमा उस्ल्लैइ धेरै पिडा भयेको थियो भने मलाई धेरै मोज। किनकि उस्को लाडो जटि बेला पनि सार्हो नै हुन्थ्यो। १५ दिन पछि को कुरा हो त्यो दिन हमिले दोश्रो पटक चिक्दै थियोउ केटो पनि यक्सपर्ट भयेको थियो मस्त आधा घन्टा देखि चिक्दै थियो यक्कसि लाडो पुति बाट झिकेर हल्लाउन थल्यो।। ओहो पहिलो पटक को भर्जिन फुसि मेरो मुख भरि नै झरिदियो। मस्त बस्ना दार फुसि सङै मैले उस्को लडो पनि चुसि दिये । बल्ल उस्को लाडो आफै सिथिल भयो।
मेरी हट माईजु..
आज माइजू आउने दिन म उहाँलाई लिन बसपार्क पुगें । चितवनबाट उहाँ झण्डै साँझको पाँच बजे आईपुग्नुभयो, एकछिन त म उहाँलाई हेरेको हेर्*यै भएं, किनकी खुला स्ट्रेट कपाल अनि टाइट जिन्स र टि-शर्टमा माइजूका ठूला ठूला दुधका पोकाले उहाँलाई २९-३० बर्षकी हट तरुनी जस्तो देखिएको थियो । रीना र माइजूलाई सँगै राख्ने हो भने दिदी बहिनी भन्न सुहाउने ज्यान थियो । मेरो त लाँडो ठनक्क भयो त्यसैले मैले सिधै माइजूलाई भनिदिंए “माइजू तपाईंत साह्रै हट देखिनुभा’छ कस्तो मेन्टेन गर्नुभाको हो फिगर त?” “छ्या भाञ्जा पनि…!” माइजूको यही जवाफले मलाई झनै उत्साहित बनायो । त्यसपछी मैले माइजूलाई टेक्सीमा राखेर कोठामा छिराएं । माइजूलाई रिनाको कोठामा छिराएर फ्रेस हुनु भन्दै म आफ्नो कोठाभित्र छिरेर माइजूको चर्तिकला हेर्नलाई केमरा अन गरें । माइजूले त्यहींनै ढोका नलगाईकन आफ्नो टि-शर्ट खोल्नुभयो अनि क्रमशः पेन्ट त्यसपछी ब्रा र पेन्टी पनि खोल्नुभयो । साँच्चिकै चिक्न लायक शरीर थियो माइजूको, पोका त टाइट अनि बाटुलो भर्खरकी तरुनीको जस्तो । म झनै अचम्मित भएं जब माइजूले आफ्नो सफाचट पुतीतिर हात पुर्*याएर पुतीबाट केही निकाल्नुभयो, वाफ रे माइजूले त पुतीबाट डिल्डो निकालेर मुखमा पुर्*याउनु भयो । अनि डिल्डो पुरै चाटेर उहाँ बाथरुममा छिर्नुभयो, म पनि हताहतार आफ्नो बाथरुम छिरेर नुहाएं र ट्राउजर र टि-शर्ट लगाएर बाहिर निस्किएं । माईजु अझै पनि बाथरुममा हुनुहुन्थ्यो । माइजू लगभग ४० मिनेटपछी बाथरुमबाट नाङ्गै निस्किनुभयो र झोला खोलेर कपडाहरु निकाल्नुभयो । त्यसपछी उहाँले पेन्टी लागाउनु भयो अनि ब्रा लगाउनुभयो । माथि पहेंलो टि-शर्ट लगाएपछी फेरी खोल्नुभयो र ब्रा फुकालेर बिना ब्रा टि-शर्ट लगाउनु भयो, त्यसपछी पेन्टी खोलेर पातलो डोरीजस्तो थोङ्ग निकालेर लगाएपछी जामा टाइपको स्कर्ट लगाउनुभयो ।
अब मैले उचित मौका खोज्नुथियो त्यसैले माइजू भएठाँउ पुगें र भनें “माइजू खानामा के खाने भन्नुस्?” “जस्तो तपाईंलाई ईच्छा लाग्छ त्यही खाने नि भाञ्जा!” यति भन्दै गर्दा माइजूको आँखा रीनाको टेबुलमाथि छरिएका कण्डमहरुमा पुग्यो । माइजूले शंकित नजर घुमाउनुभयो, उहाँले शायद मसँग अथवा म नभएको मौकामा रीनाले कोठामै कसैसँग चिकाउँछे भन्ने बुझ्नु भयो । अनि मैले माइजूको नजरलाई पत्तो नपाएझैं गरि किचनमा जान्छु भन्दै लागें, मेरो पछिपछि माइजू आउनु भयो । “कुन चिज कहाँ छ भन्नुस्! खाना म बनाउँछु ?” भनेपछी मैले माइजूलाई किचनको सबै जानकारी गरांए र भनें “माइजू, तपाईं बियर पिउनुहुन्छ कि वाइन!” माइजूले वाइन पिउनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई रीनाले भनिसकेकी थिई, माइजूले पनि वाइन पिउने संकेत दिनुभयो । केहिबेर म टि.भी. हेर्न बसें, एकघण्टा जस्तो समयपछि माइजू मैले टि.भी. हेरेको ठाँउमा आउनुभयो भन्नुभयो “खाना त तयार भयो भाञ्जा के गर्ने ?” “यति छिट्टै त के खाना खाइहाल्नु र माइजू!” भन्दै फ्रिजबाट रेड वाइन निकालें, अनि टि.भी.को मुनि भएको र्*याकबाट काजु र बदाम निकालेर टेबुलमा राखें । माइजू कमर मट्काउँदै किचनमा गएर ग्लास लिएर आउनुभयो । मैले दुवै ग्लासमा वाइन राखें र एउटा ग्लास माइजूलाई दिंदै भनें “साँच्ची माइजू तपाईं मेरो माइजू नभएको भए …” “माइजू नभएको भए के?…” “गर्लफ्रेण्डको प्रोपोज गर्थें…” “म यस्ती बुढी आइमाईलाई नजिस्क्याउनु न भाञ्जा!!!” “होइन माइजू तपाईं र रीनालाई सँगै राख्ने हो भने सबैले दिदी बहिनी भन्ठान्छन् ? ४५ बर्ष भन्न सुहाउँदैन …” “छ्या भाञ्जा आफ्नै माइजूलाई लाइन मार्नुहुन्छ…” माइजू ट्रयाकमा आइसक्नु भएको थियो । हामीले तिन ग्लास जति वाइन पिइसकेका थियौं ।
अलिअलि रमरम भइसकेको थियो, मैले टि.भी.मा च्यानल चेञ्ज गर्नथालें र स्टार मुभिजमा जेम्स बाण्डको फिल्म आइरहेको रहेछ त्यही स्टप गरें, मलाई थाहा थियो कि जेम्स बाण्डको मुभिमा बेड सिन हुन्छ नै, त्यसको प्रतिक्रिया माइजूले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने पनि बुझ्नु थियो । माइजूले बसाइमा अप्ठेरो भएजस्तो गर्दै स्कर्ट घुँडामाथि सारिसक्नुभएको थियो । जब बेड सिन आयो तब माइजूले मैले नदेखेझैं गर्दै आफ्ना दुई हातले दुवै पोका समाएर एक-अर्कामा जुधाउनुभयो र टि-शर्ट मिलाएझैं गर्नुभयो । त्यसपछी माइजूले “भाञ्जा! मलाई एउटा कुरा नढाँटी भन्नुस् है ?” “के माइजू?” “यहाँ रीनासँग को को आउँछ?” “कोही पनि त आको जस्तो मलाई लाग्दैन, किन र माइजू?” “उसको कोठामा थुप्रै कण्डमहरु देखें मैले त्यहि भएर ?” यो अति नै उत्तम मौका थियो मेरो लागि, मैले ठाडै भनिदिंए “त्यो त मैले प्रयोग गर्न ल्याएको हो माइजू!” “दुई दिनलाई त्यति धेरै चाहिन्छ त ?” “दुई दिनलाई होइन माइजू… सधैंजस्तो चाहिन्छ मलाई त?” “त्यसो भए रीना कहाँ सुत्छे त?” “छ्या माइजू ! मैले प्रयोग गर्ने कण्डम रीनाको कोठामा भेटिएपछी पनि रीना कहाँ सुत्छे भन्नुहुन्छ? रीना मसँगै सुत्छे नि !” यो साह्रै ठूलो झट्का थियो । “के! रीना र तपाईं….. के सुन्नुपर्*यो यो कानले……” “केही होइन माइजू रीना जवानी खेर फाल्न नचाहने अनि बाहिरका मान्छेसँग सुतेर भन्दा म र निलसँग सुतेर सुरक्षित हुन खोजेकी मात्र हो…?” “छ्या तपाईं सम्झाउन पर्ने मान्छे भएर उल्टै…” सही झटारो हान्ने बिचारले “धत् माइजू पनि रीनाले त तपाईंको उदाहरण दिदैं हामीलाई कन्भिन्स गरेकी… केही भन्यो तपाईंलाई बिचमा ल्याउँथी… भन्थी ममीले गावैंसँग चिकाउन हुन्छ मैले त के गरेकी छु र? अनि यो उमेरमा त तपाईं पुतीमा डिल्डो छिराएर दिनभरी बाहिर निस्कनु हुन्छ भने ऊ त भर्खर २३-२४ कि भएकी छे…” “कसले सिकायो तपाईंलाई मैले डिल्डो छिराएर हिंड्छु भनेर?” “माइजू! तपाईंले अघिमात्र लगाएको ब्रा र पेन्टी खोलेर तल पुतीमा आनन्द रहिरहोस् भनेर थोङ्ग लगाउनु भा’छ, मेरो कोठामा बसेर सबै कोठाको निगरानी गर्न मिल्छ… मसँग पनि मस्तको लाँडो छ… हेर्नुस् तपाईं नाई भन्नुहुन्न….” अनि ट्राउजर झ्वाट्ट तल सारें र फन्फनाउँदै गरेको लाँडो माइजूलाई देखाउँदै माइजूको पोकामा हात लगेर गजबले निचोर्न थालें । माइजू अक्क न बक्क पर्नुभयो “माइजू… जिन्दगीमा सधैंभर चिक्न पाईदैंन त्यही भएर पाएसम्म चिक्न छोड्नुहुन्न चाहे त्यो आफन्त होस् या जोसुकै…” अनि हातलाई माइजूको स्कर्टभित्र छिराएर पुतीमा घर्षण दिन थालें साथमा मुखमा मुख जोडेर टङ्ग किस पनि । माइजूले तुरुन्त मलाई किसमा साथ दिन थाल्नुभयो । एकछिनको किस सकेर माइजूले सोध्नुभयो “अनि रीनालाई मात्र चिक्नुहुन्छ कि नीता भाञ्जीलाई पनि…” मैले रीना र नीतालाई चिकेको भिडीयो लगाएर भनें “ल! छोरी र भाञ्जीलाई चिकेको भिडीयो हेर्दै मसँग चिकाउनुस्…” भिडीयोमा मैले रीनाको पोका खेलाउँदै पुती चाटिरहेको र नीता मेरो लाँडो चुसिरहेको दृष्य आइरहँदा मैले माइजूलाई “माइजू! चुस्नुस् मेरो लाँडो शायदः तपाईंको पुतीले यस्तो लाँडो कमै मात्र भेट्यो होला ?” “हो भाञ्जा हो… यति मस्तको लामो र मोटो लाँडो त मैले ज्वाईंसाबको र हजुरको मात्रै पाएँ, निलको लामो छ तर मोटो छैन गाँउमा एउटा दमैको पनि यस्तै मोटो थियो तर लम्बाइ थोरै कम थियो… हुन त म यहाँ तपाईंकै लाँडो चाख्नलाई आएकी हुँ रीना नभएको मौका पारेर…” “मतलब, माइजू निलले पनि हजुरलाई चिकिसक्यो…” “निलले त मलाई यही फ्ल्याटमा तिन महिनासम्म रण्डीलाई चिक्दा झैं चिक्यो नि… एकदमै फोहोरी बोल्ने अनि शारीरिक यातना दिई-दिई चिक्ने उसको रहर थियो । मलाई त कोठामा बस्दा कपडा लगाउनै दिन्नथ्यो…” “निललाई फकाउनु भयो कि कसरी चिकाउनुभयो माइजू…?” “एकदिन गाँउको करेसामा पिशाब फेर्दै गर्दा निलको लाँडो देखें अनि त मेरो पुती चिलाउन थालिहाल्यो नि… त्यसको लगत्तै पढ्नको लागि निल यहाँ आउने भयो र म पनि उसँगै उसको बन्दोबस्त मिलाउन भनेर आएं नि! यहाँ आएपछाडी मैले कमर दुखेको बहाना बनाएर उसलाई मालिस गर्न लगाएँ मालिस गर्दागर्दै मैले उसको हातलाई चाकतिरबाट पुतीतिर पुर्*याएर बढी दुखेको यहीं छ भन्दै मालिस गर्न लगाएँ, एकछिनसम्म पुतीको वरपर मालिस गरेपछी मैले उसको हात समातेर पुतीभित्रै छिराइदिंए… मेरो पुतीले पानी छोड्न थालिसकेको थियो उसको हातले मेरो पुतीमा आनन्द भइरहेको थियो त्यसपछि त उसलाई पनि रमाइलो लाग्न थालेछ क्यार मलाई औंलाले चिक्न थाल्यो म त मस्त भई आफ्नै पोका समाएर खेलाउदैं उसको मुखसम्म पुर्*याइदिएं जब उसले मेरो दुध चुस्न सुरु गर्*यो तब मैले उसको लाँडोमा हात लगेर आफू निस्केको ठाँउमा आमाको इच्छा पुर्*याइदे भनेछु, त्यति भएपछि के चाहियो र जवान केटा र प्यासी आमाको बिचमा?” माइजूले यति भन्दासम्म मैले उहाँको टि-शर्टलाई माथि सारिसकेर एउटा हातले पोका निचोरिरहेको थिएं भने अर्को हातका औंला माइजूको थोङ्गको डोरीले पुती घोट्दै थिएं । माइजूले मेरो लाँडो च्याप्प हातले समाएर खेलाउन थाल्नुभयो, मैले पूनः माइजूको मुखमा मुख जोडेर टङ्ग किस खाँए । करिब दुई मिनेट लामो ननस्टप टङ्ग किसपछी माइजूले मेरो मुखबाट आफ्नो मुख छुटाउनु भयो, ढिला नगरी लाँडो मुखमा छिराएर भित्र बाहिर गर्न थाल्नुभयो । बेला बेलामा मैले माइजूको टाउकोलाई समाएर लाँडोको जरासम्म मुख धकेलिदिन्थे, लाग्थ्यो लाँडो माइजूको घाँटीमा रहेको तर्कुले नाघेर भित्रै छिर्दैछ । गलप गलप को त्यो आवाज मलाई मजा लागिरहेको थियो, चार-पाँच मिनेटको चुसाईपछी मैले माइजूलाई सोफामा पल्टाएँ र स्कर्ट पुरै माथि सारेर पुतीमा किस गरें अनि लाँडो छिराएर चिक्न सुरु गरें । माइजू आस्वाभाविक रुपमा ब्लु-फिल्मकी रण्डीले झैं आवाज निकाल्दै मलाई साथ दिन थाल्नुभयो, तिन मिनेटको त्यो क्रमलाई माइजूले रोक्नुभयो र पूनः लाँडो मुखमा छिराएर चुस्न थाल्नुभयो । केहिबेर लाँडो चुसेपछी माइजूले मलाई सोफामा बसाएर मेरो काखमाथि आउनुभयो र मेरो लाँडोको टुप्पो समाएर पुतीको मुखमा डोहोर्*याउनुभयो अनि मेरो काखमा मच्चिन सुरु गर्नुभयो । म भनें माइजूका पोकालाई टि-शर्टमाथिबाटै खेलाउन थालें । त्यही आसनमा घरि घरि माइजू र म मुख जोड्न भ्याउथ्यौं ।
आसन परिवर्तन गर्दै गर्दै हामी झण्डै आधा घण्टासम्म चिकाचिकी खेल्दै रह्यौं, माइजू र म दुवै जन्मजात नाङ्गै भइसकेका थियौं, भिडियो स्क्रिनमा मैले नीताको मुखमा फुसी झार्दै गरेको दृष्य चलिरहेको थियो, माइजूले पनि मुखमा झार्ने संकेत गर्नुभयो र मेरो लाँडो पूनः मुखमा छिराएर चुस्न थाल्नुभयो । केहिबेरमै मेरो लाँडोबाट पिचिक्क गर्दै फुसीको धार छुट्न थाल्यो, केहि माइजूको मुखभित्रै झर्*यो भने केहि ओंठ, गाला र निधारमा झर्*यो, केहि चाँही पोकामा झर्*यो । माइजूले मेरो लाँडोको रस चुसेर सबै मुखमा लिनुभयो भने मैले गाला र निधारमा झरेको फुसी औंलाले सम्हाल्दै माइजूको मुखभित्र पुर्*याउन थालें । त्यसपछी मैले माइजूलाई अँगालेर सोफामा बसें अनि माइजूको मुखमा किस गर्दै भनें “अब खाना खाने हो कि चिकौरी माइजू… आज रातीलाई पनि त बाँकी राख्नुपर्*यो होला…?” “तपाईंले मेरो एउटा काम गरिदिनुहुन्छ त भाञ्जा…?” “भन्नुस् न!” “म यहाँ बसुञ्जेलसम्म कम्तीमा पनि हरेक दिन इच्छा लागेको बेलामा चिक्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्*यो…!” “भइहाल्छ नि माइजू…” त्यसपछी हामी नाङ्गै नै किचनमा छिर्*यौं र खाना खान थाल्यौं । खाना खाइवरी माइजूलाई मेरो कोठामा सुत्न आउनु भन्दै कोठामा आएँ र लाँडोलाई क्रिम लगाएर मुठार्न थालें । आधा घण्टा जस्तोमा माइजू काम सकेर मेरो कोठामा आउनुभयो, मैले क्रिम लगाएको देखेर भन्नुभयो “मेरो पोकामा पनि क्रिम लगाउनु पर्ने भाको छ..” “आउनु न म लगाइदिइहाल्छु नि, अहिले फेरी आफैंले खेलाउने पोका हो…” अनि मैले माइजूलाई बेडमा तानेर सुताइदिएँ त्यसपछी क्रिम हातमा लिएर पोकामा दल्दै उनको पुती चाट्न थालें । माइजू एकैछिनमा सन्किए पछी मैले ठन्केको लाँडो उनको पुतीभित्र घुसाएर मच्चिन थालें, स्क्रिनमा हाम्रो आफ्नै चिकाई रेकर्ड भइरहेको थियो, त्यो कुरा सुनेर माइजू झनै उत्साहित मसँग चिकाउन थालिन् । घरि चुसाउदैं घरि चिक्दै गरि हामीले कहिले तल कहिले माथिको क्रमलाई पनि परिवर्तन गर्दै रह्यौं ।
यसपाली फुसी झर्ने बेलामा मैले लाँडोलाई माइजूका दुई पोकाको बिचमा आफ्नो लाँडो राखें र पोका अठ्याएर लाँडोलाई अगाडी-पघाडी गर्न थालें । माइजूको निधारदेखि पोकासम्म फुसीको धार लाग्यो र माइजूले त्यसलाई सोहोर्दै मुखभित्र पुर्*याइन् । बिहान मेरो निद्रा खुल्दा माइजूको न्यानो मुखभित्र मेरो लाँडो थियो । माइजू मेरो लाँडोलाई बडो प्यारो गरि चुस्दै हुनुहुन्थ्यो, घरिघरि घाँटीको जरासम्म माइजूले मेरो लाँडो निल्दा मलाई सनक्क बनाउँथ्यो ।
केहिबेरमै मैले माइजूलाई लाँडोबाट छुट्याएर मेरो परस्परमा ल्याँए र टङ् किस लिँए, तर टङ् किस लिदै गर्दा माइजूले मेरो लाँडोलाई हातले समातेर आफ्नो पुतीभित्र छिराउनु भयो, मैले पनि किसकै दौरानमा माइजूलाई तलबाट कमर उचालेर दनक दिन थालें, त्यो गतीमा चिक्दै गर्दा मेरो लाँडो पुतीबाट चिप्लिएँ झैं हुन्थ्यो, मैले गती अझै बढाँए जसले गर्दा लाँडो पुतीको फाँकाभन्दा पनि बाहिर आयो । त्यसपछि मैले लाँडोलाई आफ्नै हातले समातेर पुतीमा दल्दै भित्र छिराउन लागेको जस्तै गर्दै एकछिन सम्म पुतीको बाहिरी भागमा दल्दै रहें र अचानकसँग माइजूको चाकमा ठेलिदिंए । आधा लाँडो चाकभित्र छिरिसकेको थियो, माईजू पीडामिश्रीत आवाजमा मलाई लाँडो निकाल्न भन्दैहुनुहुन्थ्यो । मैले भनें “पहिलो पटक त पक्कै होइन क्यार? अलि मोटो मात्र त हो?” अनि फेरी ठेलें, “आ..अ….अ…. अलि विस्तारै गाँड फाट्ला भानिज…” “जे सुकै परोस्…” अनि माइजूको मुखमा आफ्नो मुख जोडेर थुन्दै धमाधम धकेमपेलीको गती तिब्र बनाएँ । माइजूको आँखाबाट आँशु निस्कन थालिसकेको थियो, मैले त्यसमा सहानुभुती देखाएको खण्डमा काम हुँदैनथ्यो त्यसैले गती कम नगरीकन चाकमा चिक्दै रहें, केहिबेरमै माइजूले पनि मलाई साथ दिन थाल्नुभयो । केहिबेर चाकमा चिकेपछि मैले लाँडो बाहिर निकालें, हत्तपत्त माइजूले मेरो लाँडोलाई हातले समाएर मुख नजिकै लानुभयो र मुखबाट प्रशस्त थुक निकालेर मेरो लाँडोमा दल्नुभयो, मेरो लाँडो हल्का सफा भएपछी माइजूले लाँडो मुखभित्र छिराएर चुस्न सुरु गर्नुभयो । म भने माइजूको पुतीमा औंला छिराएर खेल्न थालें, लाँडो चुस्दै गर्दा मैले माइजूको पुतीलाई आफ्नो मुख नजिक ल्याएँ र पुतीमा जिब्रोले चाट्न थालें साथै माइजूको दुध पनि माड्न थालें । निकैबेर दुध माड्दै पुती चाटेपछि “माइजू! खै चाक सोझ्याउनु… फेरी चिक्छु…!” “नाई! भानिज! भो अब नाई…” “ठिकै छ त्यसोभए पुती फेस्याउनु न त?” त्यसपछी माइजूले भर छैन भन्दै मेरो लाँडोमाथि पुतीको प्वाल सोझ्याउँदै बसिन् र तल माथि गर्दै उफ्रिन थालिन् म उनका पोकालाई सक्दो बल लगाएर माड्न थालें । एकछिन लाँडोमाथि उफ्रेपछि माइजू थकित भएर मेरो छातिमा पल्टिनुभयो ।
मैले मौकाको सदुपयोग गर्दै माइजूलाई किस गर्दै बेडमा ठ्याक्कै उल्टाएँ, त्यतिबेला पनि मेरो लाँडो पुतीभित्रै थियो । माइजूको माथि रहेर मैले माइजुलाई चिक्दै रहें, माइजू अति आनन्दित मुद्रामा आँखा बन्द गरिरहेको मौका पारेर मैले पूनः चाकमा लाँडो छिराएर धमाधम चिक्न थालें, माइजूले “जति भनेपनि नलाग्ने, अर्काको ज्यान त केही होइन झैं गर्ने …” “जुन पुतीले १०० भन्दा बढी लाँडो चाखिसकेको छ, त्यो पुतीलाई रण्डीको पुती भन्दा हुन्छ, झन यो पुती त घरमा सबैको साझा पुती नै भएको हो भने चिक्नलाई फ्रेश प्वाल चाहियो नि त?” “लौ जे गरे नि गर्नुस् यो रण्डीलाई, तपाईसँग चिकाउनलाई आएकी हुँ क्यार! जसरी चिके नि चिक्नुस्!” त्यसपछी माइजूको चाकमा मैले १० मिनेटसम्म लाँडो पेल्दै रहें, फुसी झार्ने बेलामा मैले लाँडो निकालेर माइजूको निधारमा पुर्*याँउदै भने “आज तपाईको सिँउदो भरिदिन्छु मेरो लाँडेझोलले…” अनि माइजूको सिउँदोमा फुसीको पिचकारीले सेतो धर्को बनायो, बाँकी फुसी झार्न रोकेर मैले माइजूको मुखमा लाँडो छिराँए अनि बाँकि सम्पूर्ण फुसी मुखभित्र झारिदिंए ।
दीपकले आफ्नो एउटा हात रजीना को काँधमाथि चढायो।
शनिबारको दिन। मैले आफ्नो कोठामा दीपक र रजीना लाई बोलाएको थिएँ। रजीना त्यो केटी हो जसलाई मैले चाहेको थिएँ। प्रेम प्रस्ताव पनि राखेको थिएँ। खोइ किन हो कुन्नि मेरो प्रस्ताव उनीले अस्विकार गरिन्। त्यसपछी हाम्रो सम्बन्ध त्यति राम्रो थिएन। दीपक त्यो केटा जोसंग रजीना आजकल नजिक हुदै छिन्। मलाई ती दुईको सम्बन्ध देखेर कहिले काँही डाह लाग्छ। रजीना कामुक लाग्छिन् मलाई। टि-सर्ट माथि देखिने चुस्स परेका साना साना दुधका पोकाले मलाई अति नै उकुसमुकुस बनाउथे। दुब्ली दुब्ली पुड्की पुड्की उनीलाई चिकेको कल्पना गरेर धेरै चोटी मैले हस्तमैथुन गरेको छु। जिन्सको प्यान्ट लगाउदा पुट्ट देखिने उनको चाकमा प्याट्ट हान्न मन लाग्थ्यो मलाई। उसको पुतीमा मेरो लाँडो छिराएर दुइटा हातले उनको दुध मस्त समाउदै उसको ओठ टोक्ने ठुलो रहर थियो मलाई। तर ऊ चाहिँ दीपकसंग नजिक हुन्थिन्। रजीना दीपकतिर आकर्षित छ भन्ने मलाई थाहा थियो। मेरो मनमा उसलाई चिक्ने इच्छा झन् झन् बढ्दै थियो। एकदिन बरु मिल्यो भने दीपकसंगै मिलेर चिकम्ला भनेर मैले दीपक र रजीना दुबैलाई आफ्नो कोठामा बोलाएँ।
रजीना ले खरानी रंगको टि-सर्ट लगाएकी थिईन्। माथिबाट उसको दुइटा पोका मज्जाले देखिन्थे। टि-सर्ट माथिबाट दुधको मुन्टा पनि अलि अलि देखिन्थ्यो। कपाल ढाडमा छरपस्ट हुने गरि छोडेकी थिईन्। सुरुवाल लगाएकी थिईन् उनीले जसको माथिबाट उसको पुठ्ठा गोलो गोलो मज्जाको देखिएको थियो। उनीलाई देखेरै मेरो लाडो ठंकिसकेको थियो। मैले धेरै माफी मागेपछि मात्र बल्ल उनि मेरो कोठामा आउन तयार भएकी थिईन्। म यो मौका गुमाउन चाहन्नथें। दीपक र रजीना को गतिबिधि हेर्न मैले आफ्नो कोठामा नदेखिने गरि सी.सी. टि.भी क्यामेरा र माइक जोडेको थिएँ जुनको दृश्य मेरो मोबाइलबाट हेर्न मिल्थ्यो।
उनीहरु आउन बितिकै मैले दुबैलाई जिस्काएं,”आहा! तिमीहरुको जोडी कस्तो सेक्सी देखिएको । बिहे गराओ तिमेरु।” दुवै जना हाँसे। उनीहरुलाई कोठामा छोडेर म पानी ल्याउने बहाना गरेर किचेन छिरें र मोबाइलमा उनीहरुलाई हेर्न थालेँ। कोठाबाट निस्कदा मैले दुवैजनालाई उत्तेजना होस् भनेर कोठाको ढोका बन्द गरिदिएको थिएँ। केहि समय दुवै मोबाइलमा व्यस्त थिए। त्यतिकैमा दीपकले आफ्नो मोबाइलमा केहि देखाउन रजीना लाई आफु तिर तान्यो। रजीना लपक्क दीपकसंग गएर टाँसियो। दीपकले आफ्नो एउटा हात रजीना को काँधमाथि चढायो। माहोल गर्मिदै गएको म महसुस गर्दै थिएँ। मैले त्यो दृश्य हेर्दै आफ्नो सर्टभित्र हात छिर्याएर आफ्नो निप्पल चलाउन थालेँ। ती दुईजना केहिबेर मोबाइलमै व्यस्त रहे। बिस्तारै रजीना को हात दीपकको थाईमाथि सल्बलाउन थाल्यो। मलाई अत्ति भइसकेको थियो। म कोठामा गएँ। म गएको थाहा पाएर उनीहरु छुट्टिए। मैले आफु १ घण्टाको लागि बाहिर जानु पर्ने भयो भने र उनीहरुलाई फिल्म हेरेर बस्न सुझाब दिएँ अनि ढोका बन्द गरेर बाहिर निस्किएँ। त्यस पछि म घर पछाडी गएँ र मोबाइलमा उनीहरुलाई हेर्न र सुन्न थालेँ।
दीपक:- “कस्तो मान्छे होला! हामीलाई बोलाएर आफु चाहिँ बाहिर जान्छ।”
रजीना :- “त्यै त। अब १ घण्टा के गर्दै बस्ने?”
दीपक:- “खोइ के गर्ने हो अव।”
रजीना :- “मलाई त जिउ पनि दुख्दै छ।”
दीपक:- “म मिचिदिम् त ?”
रजीना :- “अँ बाठो मान्छे।”
दीपक :- “हैन म बिस्तारै मालिस गर्दिन्छु नि । तिमीलाई सन्चो हुन्छ हेर।“
दीपक उठेर रजीना को काँधमा मसाज गर्न थाल्यो। रजीना ले प्रतिबाद गरिनन्। दीपकको हात रजीना को छातीको नजिक नजिकसम्म पुग्न थालिसकेको थियो। रजीना आँखा चिम्म परेर बसेकी थिईन्।
रजीना :- “कस्तो आनन्द आउदो रैछ। ”
दीपक:-“मैले भनेको थिएँ नि।”
रजीना :-“मलाई निन्द्रा लाग्न थाल्यो दीपक, मलाई बोकेर खाटसम्म पुर्याइदेउ न। ”
दीपकले रजीना लाई हातमा बोक्यो। खाटमा लगेर राख्यो र निधारमा किस गर्यो।
रजीना ठुलो ठुलो आँखा पार्दै,”आबुई के गरेको यस्तो।”
दीपक :- “एकदमै सेक्सी लाग्यो के तिमि, थाम्नै सकिन।”
रजीना :- “केटाहरु सधै मौकाको खोजीमा हुन्छन्।”
दीपक:- “ल सरि सरि, अब देखि गर्दिन।”
रजीना :-“गर्ने बेलामा मनपरी भन्ने बेलामा सरि।”
रजीना भित्ता तिर मुख फर्काएर रिसाए जसरि बसी।
दीपक :-“सरि के सरि ”
रजीना :-“नछोउ मलाई।”
रजीना ले दीपकको हात झट्कारेर फाल्यो। दीपक झ्याल नजिकै गएर बस्यो। १५ मिनेट जति दुवैजना चुपचाप रहे।
रजीना :- “दीपक!”
दीपक :- “भन न ।”
रजीना :- “मलाई अति नै गारो भयो, मेरो बुबु चलाइदेउ न प्लिज। ”
दीपक उफ्रिदै खाटमा हामफाल्यो र दुवै जना अंगालो मार्दै टंगकिस गर्न थाले। मेरो लाँदो ठनक्क भएर आयो। मैले लाँदो निकालेर हस्तमैथुन गर्न थालेँ। दीपक टिसर्ट माथिबाट दुध चलाउदै थियो। रजीना का साना साना दुधका पोका दीपकका ठुला ठुला हातमा मज्जाले अटेका थिए। दीपक पनि दुध चलाउनमा खप्पिस थियो। हेर्दै लोभ लाग्ने गरि दुधमा हातले मसार्दै थियो। रजीना लाई एकदमै मज्जा आइराखेको म देख्दै थिएँ। दीपकले एउटा हात रजीना को चाकमाथि लगेर चलाउन थाल्यो। हेर्दै सनक्क सन्केर आउने गोलो गोलो पुट्ट परेको चाक थियो रजीना को।
रजीना :- “अझ बेसरी चलाउ न दीपक।”
दीपक झन् जोड जोडले पोका थिच्दै थियो। पोका नै फुट्ला जस्तो लागिराखेको थियो। अव भने दीपकले रजीना को टिसर्ट खोलिदिन लाग्यो।
रजीना :- “नाइँ! लुगा त खोल्दिन।”
दीपक :- “ल, मलाई सन्काएर यतिकै छोड्न मिल्छ र?”
रजीना :- “मलाई लाज लाग्छ के।”
दीपक :- “प्लिज एकचोटी मात्र । म तिम्रो बुबु एकचोटी चुसेर छोडीहाल्छु।”
रजीना :- “नाइँ के , कस्तो होला के ।”
दीपक :- “प्लिज”
रजीना :- “नाइँ”
रजीना :- “एकचोटी मात्र है त”
दीपकले टिसर्टभित्र हात छिराएर पोका चलायो अनि ब्रा खोलिदियो। रजीना ले दीपकको छातीमा धकेल्यो र उसलाई खाटमा लडायो अनि दीपकको छातीमाथि चढ्यो। ब्रा नलागाउदा रजीना को पोका टिसर्ट माथिबाटै हल्लिरहेको देखिन्थ्यो। त्यो देखेर मलाई झनै उत्तेजना बढ्यो। म जोड जोडले लाडो हल्लाउन थालेँ।
रजीना ले टिसर्ट खोलिन्। रजीना को सानो सानो पोका साच्चिकै बबालका थिए। मुन्टो पनि रातो रातो चुच्चो चुच्चो थियो। दीपकले उसको नाङ्गो पोका मिच्न थाल्यो। घरि घरि मुन्टोमा चिमोट्न थाल्यो। रजीना सिथिल भईन्। दीपकले उसलाई उचालेर खाटमा सुतायो र आफु रजीना माथि चढ्यो। दीपक रजीना को पोकाको मुन्टा चुस्न थाल्यो।
रजीना कराउदै थिईन्,”आह!! आह!! आह!! दीपक!! दीपक!! प्लिज अलि बेसरी।”
दीपक झन् जोड जोडले चुस्न थाल्यो। दीपकले पनि टिसर्ट खोल्यो। अनि खाटमा उत्तानो परेर सुत्यो। रजीना ले पनि दीपकको निप्पल चुसिदियो। दीपकलाई पनि मज्जा आएको जस्तो देखिन्थ्यो। दीपक फेरी उठ्यो।
दीपक :- “तलको नि खोलिदिम्?”
दीपकले रजीना को दुधको मुन्टा बेसरी चिमोटीदियो।
रजीना :- “आइया! ”
दीपक :- “प्लिज के , गर्न दे न।”
रजीना :- “एकचोटी मात्र है त। पछि पछि फेरी माग्न पाइदैन नि।”
दीपकले रजीना को सुरुवाल र पेन्टी खोलिदियो। सेभ गरेको चिल्लो पुती रैछ। मलाई थामिनसक्नु भयो। मलाई रजीना लाई चिक्न सकसक लागिसकेको थियो। दीपकले पुती भित्र औला छिराउदै जिब्रोले टि.सी चाट्न थाल्यो।
रजीना ठुलो स्वरमा चिच्याईन्, ”दीपक!!!”
रजीना को पुतीबाट पानीको धारो बग्न थालिसकेको थियो। दीपक प्यान्ट खोल्यो र ६९ पोजिसनमा बसेर रजीना को मुखमा लाड़ो राखिदियो। आफु चाहिँ पुती चुस्नमै ब्यस्त थियो। रजीना ले मज्जाले दीपकको लाड़ो चुसिदियो। लाड़ो चुस्न त रजीना एक्सपर्ट रैछे।
दीपक :- “अब छिराम है।“
रजीना केहि पनि बोलिन। दीपकले रजीना लाई उत्तानो पारेर राख्यो अनि रजीना को थुक लागेको लाड़ो पुतीमा ठेल्यो। लाड़ो स्वाट्ट भित्र पस्यो। दीपक मच्चिन थाल्यो। रजीना को पोकाहरु मच्चिएको देखिए। मलाई खपिनसक्नु भयो। यहि मौका हो भनेर म बिस्तारै भित्र पसे। मलाई देखेर उनीहरु झस्किए।
म :- “मलाई नि चिक्न दे न है रजीना ।”
रजीना :- “ल ल आउ।”
अनि गएर उसको पोका चलाउन थालेँ। आहा! कस्तो कसिलो अनि पोटिलो पोका। मलाई एकदम मज्जा आयो। दीपक चिकिनै राखेको थियो। म चाहिँ दुधको मुन्टा चलाउन थालेँ। त्यसपछि मैले आफ्नो लाडो रजीना को मुखमा हालिदिएँ। उसले स्वाद मानी मानी चुस्यो। अति आनन्द आउन थाल्यो। त्यतिकैमा दीपकको लाडोले पिच्कारा छोड्यो। दीपक सिथिल भएर खाटमा पल्टियो। अनि मैले रजीना लाई कुकुर स्टाईलमा राखेर चिक्न थालेँ। अति मज्जा आयो।
रजीना जोड जोडले कराउदै थिइ।
“आह आह आह बेसरी बेसरी आह छिटो छिटो आह आह ”
मलाई उसको त्यो आवाज सुनेर झन् जोश आउदै थियो। उसको पोटिलो चाकमा प्याट्ट हान्न खुब मज्जा आउथ्यो।
करिब आधा घण्टा फरक फरक स्टाईलमा चिकेपछि मेरो विर्य पनि झर्यो। रजीना र म दुबैजना सिथिल भयौं र खाटमा पल्टियौं। दीपक फेरी उठेर रजीना को पुती चुस्न थाल्यो। यसरि त्यो दिनभरीमा हामी दुई जना मिलेर रजीना लाई धेरै पटक चिक्यौँ। रजीना ले पनि रमाइलो मानि मानि हाम्रो साथ दीईन्।
एउटा कुर मलाई काकी को कालो .. छुन मन लगेको थियो।
“सर, मेरो पहिलो पटक हो, मलाई डर लाग्छ, प्लीज”
‘सबै केटीहरू यसै भन्छन् ।’ असह्य पीडा, भय र लाजले ऊ तीन दिनसम्म थला परी । पछि उसलाई बानी पर्‍यो । अब ऊ नै डाइरेक्टरलाई बोलाउन थालेकी थिई ।ऊ छिटै सफल भई । सफलताका लागि प्रतिभा र रूपमात्र भएर हुँदैन, लगन र समर्पण पनि चाहिन्छ । यो उसले राम्ररी बुझेकी छ । मोडलिङ फिल्डमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ । भीजेमध्ये कति अहिलेसम्म पैसा पाउँदैनन् । उसका लागि त्यो स्थिति छैन । ऊ भर्खरै घोषित भएकी छ फिसटेल साबुनको नयाँ ब्रान्ड फेस । उसको विज्ञापन निकै हिट भएको छ । त्यसमा ऊ एउटा पुरुषसँग सहवास गरिरहेकी हुन्छे । उसको क्रन्दन निकै उत्तेजक छ । उनीहरू दुवै सहवासको चरम आनन्द लिन्छन् । अन्त्यमा ऊ फिसटेल साबुनमा परिणत हुन्छे । मिडियामा यसबारे निकै विवाद भएको छ । त्यसले उसलाई झनै हिट बनाएको छ । ऊ खुसी छे । एक नवनायकले त्यो विज्ञापन हेरेर आफू ‘मास्टरबेट’ गर्न बाध्य भएको अन्तर्वार्ता दिएको थियो । यस्ता विवादले उसलाई झन्झन् प्रसिद्ध बनाइरहेका थिए ।
म २२ वर्षीया विवाहित युवती हुँ ,श्रीमानले यस्तै ४० मिनेटजति सम्पर्क राख्छ, मैले सुनेअनुसार यौनसम्पर्क गर्दा….
राजेन्द्र भद्रा म २२ वर्षीया विवाहित युवती हुँ । श्रीमान्सँग नियमित रूपमा यौनसम्पर्क हुन्छ । यौनसम्पर्कको अवधि यस्तै ४० मिनेटजतिको हुन्छ । परिवर्तित आसनहरूमा यौनसम्पर्क गर्दा धेरै दुख्छ, साथै स्तन पनि हल्लिन्छ । श्रीमान्ले पनि स्तन खेलाउनुहुन्छ । यसैले गर्दा हो कि मेरो स्तन लुज भएजस्तो लाग्छ । मैले सुनेअनुसार यौनसम्पर्क गर्दा योनि कालो हुनुका साथै तथा पाठेघर पनि बिग्रन्छ रे ।
के यो साँचो हो ? तपाईंले नियमित रूपमा यौनसम्पर्क गरेर पर्याप्त आनन्द प्राप्त गरेको आभास पाइन्छ, जुन राम्रो कुरा हो । फरक आसनको अभ्यास पनि गर्नुहुँदो रहेछ अनि यौनांगको रंगका बारेमा यति चासो राख्नुले तपाईं आफ्नो यौन तथा यौनिकतासम्बन्धी कुरामा सचेत हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ ।
परिवर्तित आसनमा यौनसम्पर्क गर्दा दुख्छ तपाईंले के–कस्तो आसनमा यौनसम्पर्क गर्दा दुख्छ स्पष्ट रूपमा जानकारी नदिनु भएकाले यसै भन्न सकिने स्थिति भएन, तर छोटकरीमा भन्नुपर्दा विशेष गरी ती यौन आसनमा यौनसम्पर्क गर्दा दुख्छ, जसमा लिंगले प्रत्यक्ष रूपमा पाठेघरको मुखमा धक्का दिन्छ ।
तपाईं र तपाईंको श्रीमान्लाई पनि थाहा हुनुपर्छ कि योनिको बाहिरी एकतिहाइ भाग यौन संवेदनशील हुन्छ न कि भित्रको । यौनसम्पर्कका बेला तपाईंलाई पनि लिंग भित्रसम्म पसाइयोस् जस्तो लाग्न सक्छ, तर यहीले यौनसम्पर्क गर्दा दुख्ने कारण बन्न सक्छ । मुख्य कुरा के भने जुन यौन आसनमा पीडा हुन्छ त्यसको प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ । यो कुरा आफ्ना श्रीमान्लाई खुलस्त रूपमा भन्नुहोस् । त्यसपछि आफूलाई नदुख्ने किसिमको अर्कै कुनै आसन प्रयोग गर्नुहोस् ।
अन्य कुनै लक्षण जस्तै फरक किसिमको योनिश्राव हुने वा रगत आउने वा कुनै शंका छ भने स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग सम्पर्क राख्नु बेस हुन्छ । श्रीमान्ले खेलाएकाले स्तन कसिलो नभएको हो कि ? व्यक्ति–व्यक्ति तथा जातिअनुसार, पूर्ण विकसित स्तनको आकार र साइजमा पर्याप्त भिन्नता पाइन्छ ।
सामान्यत: स्तनको आकार वा स्वरूपलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख कुरा निम्न छन् । स्तनका तन्तुको मात्रा, पारिवारिक इतिहास, उमेर, तौल बढ्नु वा घट्नु, स्तनको छालाको मोटाइ वा तन्किन सक्ने गुण, रागरस (हार्मोन) हरूको प्रभाव, स्तनको विकासका क्रममा यसको आकार र कडापनमा पनि परिवर्तन हुन्छ ।
कतिपय स्तन गोलाकार हुन्छ भने केहीको आकार अलि चुच्चो देखि झोल्लिएको सम्म हुन सक्छ । अर्को विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने किशोरावस्थामा स्तनको तन्तु बढ्दै जाँदा यो गोलाकार हुन्छ र यसका तन्तुहरू पनि निकै खाँदिने भएकाले वयस्क उमेरका महिलाभन्दा कडा वा पुष्ट हुन्छ ।
उमेर बढ्दै गएपछि स्तनको खँदिलोपन पनि घट्दै जाने हुनाले पहिलेको तुलनामा नरम हुँदै जान्छ । तपाईंले यसैलाई संकेत गर्नुभएको होला । तपार्इंको श्रीमान्ले यौन क्रियाकलापका सन्दर्भमा स्तन खेलाउँदैमा कम खँदिलो हुने होइन । पहिले तौल बढी भएर पछि घटेको स्थितिमा पनि स्तनको आकार तथा खँदिलोपनमा कमी आउन सक्छ ।
कतिपय तस्बिरमा जुन चलाखीले स्तनलाई आकर्षक देखाएको हुन्छ, त्यसलाई हाम्रो सामाजिक जीवनमा उतार्न सजिलो छैन । त्यस्ता तस्बिरका कारण हामीमध्ये कतिपय दिग्भ्रमित हुन पुग्छौं ।
स्तनको आयतन विशेष गरेर त्यसमा भएको बोसोले निर्धारण गर्छ । यी विशेष तन्तु छातीमा टाँसिएका हुन्छन् र महिलाको शरीरको चालअनुसार मज्जाले हल्लिन्छन् । यो कुरामा अन्यथा सोच्नुपर्ने कुनै आधार म देख्दिनँ । योनिको रंग किन कालो भएको ? तपाईंले योनिको रंग भन्नुभएको हो वा भगक्षेत्र वा भगोष्ठको ? स्पष्ट छैन । हामीले बोलीचालीको सन्दर्भका योनि भने पनि वास्तवमा यी फरक कुरा हुन् । योनिको रंग पनि व्यक्ति–व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ ।
योनिको रंग विशेष गरेर गुलाबी वा रातो रंगको हुन्छ । कतिपय स्थितिमा यी रंग गाढा भए पनि खासै चिन्ताको विषय नहुन सक्छ । यसका साथै भग क्षेत्र वा भगोष्ठको छालाको रंग छालाको अन्य भागको तुलनामा बढी गाढा हुन्छ । किनभने यसमा छालालाई गाढा रंगको बनाउने तत्त्व बढी हुन्छ ।
यौनसम्पर्कका बेला रक्त प्रवाह योनि, भगक्षेत्र अर्थात् भगोष्ठमा बढी हुने हुँदा पनि यो बढी गाढा रंगको देखिन्छ, तर उत्तेजना शान्त भए पछि फेरि यो सामान्य अवस्थामै आउँछ । त्यसबाहेक अन्य कतिपय कुराले पनि यसको रंगलाई असर गर्छ । हार्मोनको मात्रामा उतार चढाव, यौनांग क्षेत्रमा भएको संक्रमण, यौनांगमा निरन्तर अधिक टयाल्कम पाउडरको प्रयोग, यौनांगमा प्रयोग गरिने क्रिम वा साबुन वा त्यस्तै उत्पादनहरूको असर अनि सिन्थेटिक कपडाले बनेका अति नै कसिलो कपडाजस्ता अनेक कुरा यसको कारण हुन सक्छ । यौनसम्पर्क गरेका कारणले प्रत्यक्ष रूपमा योनि कालो हुने कुनै आधार छैन ।
अर्को कुरा पाठेघरको काम नै गर्भाधानपछि शिशुलाई विकसित हुने एक सुरक्षित स्थान दिनु हो । गर्भधारण नै यौनसम्पर्कबाट हुन्छ, त्यसैले यौनसम्पर्कले पाठेघर बिग्रन्छ भन्ने कुरा गर्नु मनासिव छैन । तपाईंले पत्रमा चिलाउने, असजिलो हुने, रंग परिवर्तनका साथै पीडा हुने, अत्यधिक अस्वभाविक योनि श्राव जस्ता कुरा उल्लेख गर्नुभएको छैन । यदि त्यस्ता केही लक्षण छैनन् भने तपाईंले खासै चिन्ता गर्नुपर्ने देखिँदैन । योनि वा यौनांग क्षेत्रको कालोपनले तपाईंको आकर्षणमा कमी आउने होईन भन्ने कुरा तपाईं अनि तपाईको श्रीमान्ले पनि बुझ्नुभएकै होला ।
अहिले छालाको गोरोपनलाई सुन्दरता वा आकर्षणसँग जोडिन्छ । पहिले अनुहारको गोरोपनको कुरा विस्तारित भएर गर्दन, हात, पाखुरा हुँदै ढाडसम्म पुगेको छ । यहाँ तपाईले योनि वा यौनांग क्षेत्रलाई छालाको रंगपस्तो कम गाढा वा गोरो बनाउने कुनै आवश्यकता नभएकाले त्यसमा लाग्नु हुनेछैन भन्ने विश्वास लिएको छु ।
कान्तिपुर साप्तहिक बाट ।